WARBIXIN: KAALINTA HAWEENKA AY KU LEEYIHIIN HORUMARKA BULSHADA BERGEN. | gobolada.com
WARBIXIN: KAALINTA HAWEENKA AY KU LEEYIHIIN HORUMARKA BULSHADA BERGEN.
Dec 2, 2018 - jawaab
Is dhiiragelintu waa shey qaali ah, waana shidaalka ay bulsho ku hormarto, waa miisaanka aragtida dheer ee lagu cabiro is ogalaanshaha iyo wax isku quurista dadnimo ee nagu beeran, waana arrin aad u wayn oo waayahaan ka maqan dadkeena.
Sidaan wada ogsoon nahay bulshadu waxay ka kooban tahay ragg iyo dumar guud ahaan, sidaa aawadeed horumarka waxa uu ka yimaadaa dadaal laba geesood kaasoo ka yimaada ragga iyo dumarka oo is garabsanaya.
Iyadoo ay taasi jirto ayaa waxaa jaleecaynaa kaalinta Haweenku ay ku leeyihiin horumarka bulshada gaar ahaan Ururka Haweenka Soomaaliyeed ee gobolka Hordaland (DEN SOMALISK KYINNEFORANING I HORDALAND), iyadoo inta badan la tilmaamo kaalinta ragga.
Marka aan sidaa leeyahay ugama gol lihi waxaa la ilaabay kaalintii dumarka ku lahaayeen horumarka ee waxaan is iri malaha raggu haweenkay u dhaafeen inay wax ka qoraan kaalinta ay ku leeyihiin horumarka bulshada.
Ilbaxnimada Adduunka gaartay iyo kaalinta weyn ee laga gaaray aqoonta waxay keentay in la fahmo kartida iyo kaalinta ay haweenku ku leeyihiin horumarka bulshada, waxayna dad badani aaminsan yihiin kaalinta aqoonta inay ragga kagaba horeeyaan.
Tijaabooyin la sameeyey ayaa lagu ogaaday inay xifdiga iyo luuqadahaba kagaba fiican yihiin ragga, iyadoo aan qoraal lagu soo koobi Karin sida ay haweenku uga dhex muuqdaan qeybaha kala duwan ee bulshada, sababtoo ah ALLAAH ayaa naxariis iyo nabad jacayl ku abuuray qalbiyadooda.
Haddaba ururka Haweenka Soomaaliyeed ee gobolka Hordaland xilkaa saaran ayaga oo gudanaya ayaa waxay ka qeyb qaataan horumarinta bulshada qeybaheeda kala duwan, waxaana la oran karaa ragga ayaga ayaaba kaga horeeya arrintaas.
Haweenku iyagoo la daalaa dhacaya xanaaneenta Carruurta, hagaajinta howlaha guriga isla markaana ay dhana shaqooyin banaanka ah laylinayaan ayay haddana waxay mar waliba u heelan yihiin ka samatabixinta dhibaatadda Ummadooda Soomaaliya ku nool iyo kuwa halkan ku sugan, kaalin muhiim ah ayayna bulshada kaga jiraan.
Waxay hormuud u noqdeen kuwa ka shaqeeya iskaashiga iyo is garab qabsiga iyo saacidaadka dadka dhibaateysan, taas waxaa cadeen inoogu filan doorkii ay ka soo ciyaareen musiibooyinkii ugu dambeeyey ee dalka Soomaaliya ka dhacay sanadkii tagay iyo dhibaatooyin la soo darsay qeybaha kala duwan bulshada ku nool magaaladan gudaheeda, waxayna mar waliba u qalbi iyo niyad furan yihiin caawinta dadka tabaalaysan.
Sidoo kale waxay habeen iyo maalin ku howlan yihiin sida ay u soo saari lahaayeen Ubad wanaagsan, jecel Diintiisa, dadkiisa, dalkiisa nafaf yaashoodana wax tara, sidaa ayayna haweenku ku yihiin haldoorka Ummadda Soomaaliyeed.
Iyadoo aan qoraal maalin kaliya aan lagu soo koobi Karin kaalinta haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan Ururka Haweenka Magaalada Bergen ay ku leeyihiin Bulshada, Waxaan ILAAHAY ugu mahdinayaa in maanta bulshadeena fahantay qiimaha haweenka, waxaanan ALLAAH u waydiinayaa dambi dhaaf, dadaalkoodana la garab galo, inaguna waxay inaga mudan yihiin in aan garab taagnaano.
Ugu danbeyntii waxaa ku soo koobayaa Ururka Haweenka Soomaaliyeed ee Magaalada Bergen oo runtii hanaankoodu uu wanaagsan yahay in aan garab istaagnaa, isla markaana isku meel uga soo wada jeesano, waana in aan garano waajibka inaga saaran waa haddii aan nahay ragga Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Bergen ee dalka Norway.
W/Diyaariyey: Bile Mohamed Abdi (Bile Baastey).